Otu esi etinye VMware Workstation Pro Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye VMware Workstation Pro Ubuntu 20.04
October 21, 2021 June 7, 2021 by Jọshụa James
Budata VMware Workstation 16 Pro
Ikikere ngwugwu ọrụ VMWare
Wụnye VMWare Workbench Pro 16
Mwepụta & Nhazi zuru oke nke VMware 16 Pro
Ọrụ VMware bụ ngwa igwe mebere igwe eji eme kọmputa x86 na x86-64 iji na-arụ ọtụtụ sistemụ arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ n'elu otu igwe nnabata anụ ahụ. Igwe mebere ọ bụla nwere ike ịme otu ihe atụ nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla dị ka FreeBSD, Linux, macOS, ma ọ bụ Windows. Emebere VMware na 1998 site na akụkọ siri ike nke imepụta ngwaahịa dị elu maka ịdị mma, yana arụ ọrụ VMware Workstation na 2001.
Ojiji a na-ejikarị maka igwe mebere bụ iji rụọ ọrụ dịpụrụ adịpụ maka mmepụta ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka ọrụ. Site na VMware maka mmepụta, ị nwere ike gbanwee n'etiti ntọala ngwa ngwa. Ọ bụrụ na akụrụngwa na-ekwe ka sistemụ arụmọrụ nnabata, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ sistemụ arụmọrụ na-agba ọsọ iche iche ma ọ bụ na-arụkọ ọrụ ọnụ. Nke a bara uru maka ndị ọrụ Linux na-agba ọtụtụ mbipụta nkesa.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye VMware PRO 16 na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Note Workbench bụ ngwanrọ akwụ ụgwọ mana ọ na-abịa na nnwale ụbọchị iri atọ.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ ịwụnye Build Essential na GNU Compiler.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04
64-bit x86/AMD64 CPU dakọtara na 2011 ma ọ bụ mgbe e mesịrị *
1.3GHz ma ọ bụ ọsọ isi ngwa ngwa.
2GB RAM kacha nta / 4GB RAM ma ọ bụ karịa akwadoro.
Onye ọbịa General OS chọrọ.
VMware Ụlọ ọrụ kwa na Player na-agba ọsọ na ọtụtụ 64-bit Windows ma ọ bụ Linux host sistem: Windows 10. Windows Server 2019.
Iji mezue nkuzi a wee wụnye VMware PRO 16, mee iwu na-esonụ iji hụ na etinyere ihe niile dị mkpa na sistemụ gị.
Gaa na ndị ọrụ gọọmentị download page nke VMware Workstation Pro, wee họrọ "Budata UGBUA" n'okpuru Workstation 16 Pro maka Linux.
Họrọ "Chekwa faịlụ" wee pịa OK.
Ihe ngwugwu ahụ dị ihe dịka 500MB. Ọ ga-ebudata ngwa ngwa ọ gwụla ma ị nọ na oke ọsọ njikọ.
Ozugbo ịmechara nbudata ahụ, mepee ndekọ nke ibudatara faịlụ ngwugwu ahụ. Ọtụtụ mgbe, nke a ga-adị na ndekọ nbudata gị, anyị ga-eme ya site na iwu na-esonụ.
Faịlụ kwesịrị inwe ikike nke "-rwxrwxr-x", nke ị nwere ike kwado site na iwu a.
Akụkụ ikpeazụ nke nrụnye bụ ịga n'ihu na iwu ntinye a.
Dabere n'otú igwe nnabata ahụ siri dị ike, ọdụ ụgbọ ala ga-agba ọsọ maka nkeji ole na ole, ikekwe ogologo oge. Ozugbo emechara, ị ga-ahụ mmepụta dị ka n'okpuru.
Ọzọ, anyị na-aga ịchọta VMWare Workbench dị na ngwa ngwa Ubuntu.
Pịa VMware ebe ọrụ. Na-esote, ọ ga-akpọrọ gị gaa na nhazi na nkwekọrịta mbụ. Họrọ nabata usoro wee kụọ ọzọ.
Ugbu a, nkwekọrịta ikike nke abụọ na-abịa. Kwekọrịta dị ka n'elu wee pịa gaba n'ihu. Ị ga-ahụ maka ngwaahịa na mmalite. Ekwesịrị ịhapụ nke a dị ka ndabara wee gbanye.
Atụmatụ mmemme nkwalite ahụmịhe ndị ahịa VMware na-esote, họrọ ee ma ọ bụ mba, wee pịa ọzọ.
Tinye igodo ngwaahịa gị, nwalee VMware Workbench 16 Pro maka ụbọchị 30, wee kụọ imecha.
Ekele, nrụnye ezuola, na VMware Workbench ga-emeghe. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ikpe, ọ ga-enye gị ozi mmapụta oge mbụ ọ ga-emepe.
VMware Workstation Pro bụ sọftụwia mebere nke ọma. O nwere ike ịbụ nke kachasị ewu ewu n'ahịa ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi ndị ọzọ na ọ ga-ejere gị ozi nke ọma n'ịmepụta igwe mebere. Linux VMware workbench na-arụ ọrụ nke ọma, dịka onye otu Windows ya. Ị nwere ike mfe idetuo mebere igwe n'etiti ma nyiwe na-emeghe ha na-enweghị ihe ọ bụla hassle na-enye nke a mpempe software isi mkpịsị aka elu maka mgbanwe.
Otu esi etinye Utility Duf Disk na Ubuntu 20.04
Otu esi eme ka & hazie mkpakọ Gzip na Nginx